Syria · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Syria
Ny fomba nataon'i ISIS nametrahany ny dindo maintiny tao Siria
Ady & Fifandirana03 Mey 2020
Siria : Fifankatiavana anaty fotoanan'ny famoretana
Ady & Fifandirana17 Avrily 2020
Eoropa Afovoany & Atsinanana23 Novambra 2019
Tantara mikasika ny Syria
(Lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2007) Volana masina amin'ny fanisanandro Miozolomana ny Ramadany ary ankalazaina any amin'ny firenena Miozolomana rehetra. Ny fety Aïd no mamarana izany aorian'ny fifadian-kanina efatra herinandro. Mandritra ity volana ity, tsy mihinana sy tsy misotro manomboka hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany, tsy manao firaisana sy tsy...
Ady & Fifandirana 29 Marsa 2021
Etazonia 15 Desambra 2020
Jordania 24 Aogositra 2020
Maninona i Tiorkia no tsy mitsabaka ao Siria ?
Tiorkia 04 Janoary 2020
Efa nandany fepetra ahafahan'ny tafika miditra an-tsehatra i Ankara. Tsy mbola miditra amin'ny famonjena an'i Kobané foana anefa ny tafika tiorka. Nahoana?
#WithSyria (Miaraka amin'i Siria) mba hitsahatra ny fandarohana baomba an-jambany ny sivily siriàna
Fahalalahàna miteny 03 Janoary 2020
Sonia 100.000 no kendren'ny fanentanana #withSyria (miaraka amin'i Siria) ho azo mba ho henoin'ireo mpitondra erantany ny feony, ka mba hihetsika izy ireny hampitsaharana ny daroka baomba tsy mitsahatra atao an-jambany amin'i Siria.
Ady & Fifandirana 25 Desambra 2019
Avy ao Syria mankany amin'izao tontolo izao: Fanamarihana momba ny jadona, ny ady sy ny fahadisoam-panantenana
Ady & Fifandirana 09 Oktobra 2019
Mifototra amin'ny zava-misy ankehitriny sy ny tantara marina momba ny vahoaka Syriana, anisan'izany ireo namana sy havan'ny mpanoratra, mampiseho ny lafiny maro amin'ny voina Syriana ireo Fanamarihana ireo ary mampiseho mazava ny faharefoan'ny fiainana Syriana.